Wasaaradaha Internetka - Wacyigelinta
Liisaska liisaska waxaa si gaar ah loogu talagalay kaniisadaha Masiixa iyo mid kale. Ma lihin kaniisadaha isticmaala qalabka muusiga ee adeegyadooda cibaadada, iyo haddii kaniisadaadu isticmaasho magac ka duwan fadlan halkan ha ku qorin.
Ka hor intaadan soo sheegin macluumaadka kaniisadaada ama samaynta wixii cusbooneysiin ah waxaad marka hore u baahan doontaa inaad saxiixdo "Account Login". Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad gasho si aad ugu qorto macluumaadkaaga ururrada ku soo hagaaji liiska inta badan sida loo baahan yahay. Kharashka adeegga sanadlaha ah ee $ 29 (USD) ayaa looga baahan yahay. Markaad heshid lacag bixinta waxaad awoodi doontaa inaad ku darto xogtaada "Diiwaanka Dunida ee Kaniisadaha Masiixa" iyo "Kaniisadaha Masiixa Online Christine" (kaniisadaha websaydhka ah) iyada oo aan kharash dheeraad ah laga bixin sanadka oo dhan.
Waxaa laga yaabaa inaad bixiso "Account Login" oo leh kaarka amaahda ama kaarka deynta. Wasaaradaha Internetku waxay isticmaalaan server lacag bixineed oo lacag la'aan ah iyada oo loo marayo PayPal.com.
Lacagtaada ayaa naga caawin doonta inaan sii wadno adeeggan qiimaha leh ee kaniisadaha Masiixa aduunka oo dhan.
Ilaahay ha ku barakeeyo, oo aad ku mahadsantahay inaad ku darto xogtaada ururka "Our Guide to the World of Churches" iyo "Our Church of Christ Online Directory".
Kaniisadaada ama wasaaraddaada ma u baahantahay bogga internetka?
Waan caawin karnaa. Website-yada Website-yada ah waa mid sahlan oo bilaash ah in la isticmaalo mid ka mid ah qorsheyaasha martigelinta ee aan bixino. Haddii loo baahdo, waxaan samayn karnaa bogga internetka xirfad leh kharash yar. Riix halkan ama barta shabakadda ee faahfaahin dheeraad ah.